Ajjeechaa Miyoo: 'Durba fuudhanii cidhaa osoo galanuu ajjeefaman' - BBC News Afaan Oromoo
Godina Booranaa Aanaa Miyoo magaalaa Hiddii Lolaatti kaleessa galgala naannoo sa'aa 1:30tti dhukaasa 'raayyaa ittisa biyyaatiin banameen' namootni shan ajjeefaman.
Bulchaan aanaa Miyoo Obbo Badhaanee Liiban misirroowwan lamaanii fi miinjeewwan isaanii waliigalatti namootni shan akka ajjeefamani fi kan biroo lama immoo akka madaa'an BBCtti himan.
Madooliin lamaanis gara hospitaala Yaaballootti ergamaniiru jedhan.
''Haadha warraafi ilmoo kiyya na biratti ajjeesani"
"Namootni kun ruufa maratanii, durba fuudhanii cidhaa osoo galanuu ajjeefaman" kan jedhan jiraataan aanaa Miyoo BBC'f yaada isaanii kennan "raayyaan ittisa biyyaa ijoolluma nagaa motoraan imalaa turan irratti dhukaasan" jedhan.
Miseensootni raayyaa ittisa biyyaa hojii nagaa kabachiisuu jedhuun gara aanaa isaaniitti torbee lama dura akka deeman kan dubbatan bulchaan aanaa Miyoo Obbo Badhaanee Liiban, dhimmi olaantummaa seeraa itti cabee humna aanaatii ol ta'ee akka hin jirre himan.
"Wanti rakkoo nutti ta'ee deeggarsa isaanii itti gaafannee hin jiru"
''Ittisa biyyaafi hidhattoonni uummata keessaa yaa dachaafaman''
Raayyaan ittisa biyyaa humnootii hidhatanii socho'an humna ABO sakkata'uu akka barbaadan kaleessa galgalas magaalaa Hiddii Lolaa keessatti dhukaasaa akka turan bulchaan aanichaa himu.
Goodayyaa suuraa Hiddii Lolaa, Finfinneerraa gara Kibbaa km 721rra kan argamtu wayita tahu, daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa gargar baasuurraa kiloomeetiroota muraasa fagaatti.
Kaleessa galgala namootni 32 miseensoota raayyaa ittisa biyyaatin kaampii raayyaa ittisa biyyaa keessatti hidhamanii akka turan fi isaan keessaa 26 akka hiikkaman taasisuu isaanis obbo Badhaaneen BBCti himaniiru.
Dhimmaa ajjeechaa Raayyaan Ittisa Biyyaa itti yakkame Ajajaa Itti-aanaa waliigalaa Waraana Itoophiyaa Jeneraal Birhaanuu Juulaa gaafannus, ''Ani hin dhageenye hojii biraarran ture,'' nuun jedhaniiru.
''Dhimma kana Daarektara Olaanaa Indooktireshiniifi Komunikeeshinii Raayyaa ittisa Biyyaa gaafadhaa,'' jedhanis Janaraal Mohaammad Tasammaa argachuu hin dandeenye.
Magaalaan Hiddii Lolaa, magaalaa Finfinneerraa gara Kibbaa km 721rra Godina Booranaa keessatti kan argamtu wayita tahu, daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa gargar baasuurraa kiloomeetiroota muraasa fagaatti.
Waldhabdee uumameen namootni aanaa Mooyyaleerraa buqqa'an deggersa dhabne jedhu
19 Sadaasa 2018
Harargee Bahaa: ''Haadha warraafi ilmoo kiyya na biratti ajjeesani"